၂၀၁၈ အော်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းထွက်ပြီ - 'Shape of Water' က ကဏ္ဍ ၁၃ ခုနဲ့ဦးဆောင်နေ - MoviesFan
၂၀၁၈ အော်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းထွက်ပြီ – ‘Shape of Water’ က ကဏ္ဍ ၁၃ ခုနဲ့ဦးဆောင်နေ
အကြိမ် ၉၀ မြောက် အော်စကာဆုတွေအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာ ဒါရိုက်တာ Guillermo Del Toro ရဲ့ Shape of Water က ကဏ္ဍ ၁၃ ခုမှာ ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခံရပြီး အော်စကာပြိုင်ပွဲရဲ့ရှေ့ဆုံးကနေဦးဆောင်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ ဒါရိုက်တာ Christopher Nolan ရဲ့ Dunkirk က ကဏ္ဍ ၈ ခု၊ ဒါရိုက်တာ Martin McDonagh ရဲ့ Three Billboards outside Ebbing, Missouri က ကဏ္ဍ ၇ ခုအသီးသီးတို့နဲ့ ကပ်လိုက်နေကြပါတယ်။
မင်းသမီးကြီး Meryl Streep ကတော့ The Post ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးနေရာအတွက် ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ သူမရဲ့ ၂၁ ကြိမ်မြောက် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာအော်စကာဆန်ခါတင်ဆုဖြစ်ပြီး သူမရဲ့စံချိန်ဟောင်းကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ချိုးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လူတွေကတော့ အဲဒီစံချိန်ကိုမှီဖို့တော်တော်ကြီးကိုမလွယ်တော့ပါဘူး.. ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒုတိယနေရာမှာရှိသူတွေက ၁၂ ကြိမ်စီသာ ဆန်ခါတင်စာရင်းထဲပါဝင်ကြသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် John Williams ကလည်း Star Wars: The Last Jedi ရဲ့ score နဲ့ သူ့ရဲ့ ၅၁ ကြိမ်မြောက် ဆန်ခါတင်ဆုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ အော်စကာဆုအတွက် ကဏ္ဍအလိုက်ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခံရသူတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ အော်စကာဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိကြမယ်ဆိုတာကတော့ မတ်လ ၄ ရက်နေ့ကျရင်သိရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Timothee Chalamet, in Call My By Your Name
Daniel Day-Lewis, in Phantom Thread
Daniel Kaluuya, in Get Out
Gary Oldman, in Darkest Hour
Denzel Washington, in Roman J Israel Esq.
Willem Dafoe, in The Florida Project
Woody Harrelson, in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Richard Jenkins, in The Shape of Water
Christopher Plummer, in All The Money In The World
Sally Hawkins, in The Shape of Water
Frances McDormand, in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Margot Robbie, in I, Tonya
Saoirse Ronan, in Lady Bird
Meryl Streep, in The Post
Mary J Blige, in Mudbound
Allison Janney, in I, Tonya
Lesley Manville, in Phantom Thread
Laurie Metcalf, in Lady Bird
Octavia Spencer, in The Shape of Water
Phantom Thread, Anderson
‘Mystery of Love’, Call Me By Your Name
Logan, screenplay by Scott Frank & James Mangold and Michael Green. Story by James Mangold
The Shape of Water, screenplay by Guillermo del Toro & Vanessa Taylor. Story by Guillermo del Toro
Previous Post: ၂၀၁၇ ရဲ့အညံ့ဆုံးမင်းသမီးဆုအတွက် ဆန်ခါတင်ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ Emma Watson
Next Post: သတင်းသဲ့သဲ့ထွက်လာတဲ့ ‘RoboCop’ ရုပ်ရှင်အသစ်